30 Christmas onyinye echiche n'ihi na tech-savvy ụmụ - News Ọchịchị
30 Christmas onyinye echiche n'ihi na tech-savvy ụmụ
Isiokwu a na-akpọ “30 Christmas onyinye echiche n'ihi na tech-savvy ụmụ” e dere site Stuart Dredge, n'ihi na theguardian.com on Thursday 26 November 2015 07.00 UTC
N'ihi na ndị nne na nna na-achọ ka agbata n'ọsọ ụmụ ha pụọ ​​n'ebe a ndụ online, e nwere ọtụtụ tangible, -echepụta, mmụta ma na / ma ọ bụ ụtọ anụ ahụ ngwaahịa si n'ebe ahụ tech-savvy umu 2015.
Ma ị na-a nne na nna, carer, ikwu ma ọ bụ enyi ezinụlọ - na ihe ọ bụla unu price nso - ị na-Mkpughe maka oke mgbe ọ na-abịa tech-metụtara onyinye afọ a. Lee ụfọdụ n'ime ihe ndị kasị mma ihe atụ.
Ọ bụrụ na gị na ụmụ gị na-mgbe niile na-agbalị ka ha jide gị mbadamba, o nwere ike ime ka uche ịzụta ha ha onwe ha - na adabara iwu banyere otú ihe ha na-eji ya, n'ezie. Amazon si nwa-okowụk mbadamba kwesịrị nnọọ a anya. N'ihi na £ 100 ị ga-esi a nippy ngwaọrụ a chunky rubberised ikpe iji chebe ya tụlee - na Amazon si Fire n'ihi na Na Na Na Unlimited £ 3.99-a-ọnwa ndenye aha bundling ngwa ọdịnala, akwụkwọ na egwuregwu.
• Full nyochaa nke Fire HD Kids Edition
Nzuzo maka Beginners Iji ọkọ.
2. Nzuzo maka Beginners Iji ọkọ (£ 13)
Usborne e ekwusara akwụkwọ ụmụaka banyere mmemme ebe ọ bụ na ngwụsị afọ ndị 1970, na ya ọhụrụ ntọhapụ dabara neatly n'ime na ihe nketa magburu. The akwụkwọ na-elekwasị anya ọkọ, na visual mmemme na gburugburu ebe obibi na a na-eji na a na-eto eto ọnụ ọgụgụ nke British ụlọ akwụkwọ ịme ụmụaka na nzuzo. Ọ bụ ihe ịgụ iwebata, -eje ije ụmụ site na isi tupu ịnweta ha malitere on ụfọdụ fun oru ngo iji gbatịa nkà ha.
• Interview: Usborne si Lisa Watts on akụziri ụmụ koodu
Minecraft Kwụsị-Motion Movie Onye kere.
3. Minecraft Kwụsị-Motion Movie Onye kere Animation Studio (£ 30)
Ọtụtụ nde ụmụaka n'anya na-egwuri egwu Minecraft, nakwa dị ka na-ele ndị online videos na e kere na-eji ya site YouTubers ka Stampy na The Diamond Minecart. Nke a kit si Mattel Aims na-atụgharị ụmụaka n'ime blocky storytellers ha onwe ha na nri, ezie na. Ọ bụ a set nke props na Obere-ekwu na ọnụ ọgụgụ na-agụ akụkọ na pụrụ ime ndokwa, ekem ọwọrọ ike nkwụsị-efegharị fim na iji (free) enyi ngwa n'ihi na android ma ọ bụ iOS.
Haynes Mee Your Own V8 Engine.
4. Haynes Mee Your Own V8 Engine (£ 40)
Otú ọtụtụ oge a nne na nna na-eche n'ezie n'ụlọ ha n'oge n'inyoba anya na innards nke ha ụgbọala? Ikekwe ọ bụ oge ịzụlite ụmụ anyị. Nke a kit si ụlọ ọrụ n'azụ a ma ama ụgbọ ala akwụkwọ ntuziaka bụ a n'ụzọ zuru ezu arụ ọrụ V8 petrol engine, nke ụmụ nwere ike iru site ọkọ. -Egbu maramara spak plọg na ụda dere si ata ihe na-gụnyere.
The Ịrịba Intergalactic Journey Home.
5. The Ịrịba Intergalactic Journey Home (£ 20)
Nke a abụghị a gadget: rue gị ụmụaka nọ, ọ bụ naanị a ebipụta akwụkwọ. Ma technology bụ n'azụ Mpaghara. mbụ, n'ihi na ọ na-ahaziri nwa gị aha, -esonụ on si nkwusa Echefuola My Name mbụ akwụkwọ The Nwatakịrị / Girl Nwụrụ ya / ya Name. ma Nke abuo, n'ihi na gị adreesị e ji eme ka ndị ikpeazụ page a satellite map nke gị onwe gị ụlọ. Ekiri ụmụ gị jaws idebe mgbe ha na-aghọta.
• Interview: Furu efu My Name agwa a $ 9m ego akụkọ
Sam Science Museum mmewe Kit.
6. Sam Science Museum mmewe Kit (£ 100)
Micro-na ngwá electronic nwere ike na-eme ka a comeback na a ọnụ ọgụgụ nke ụlọ akwụkwọ, ma na-aka-na na ngwaike ka nwere ike ịbụ na-eyi egwu maka ụmụaka. The Science Museum si mmewe Kit aims ka ọ na ihe ịgụ, na a igbe nke sensọ na buzzers na nwere ike jikọọ na ikuku na-achịkwa via a enyi ngwa. omume ise, site n'izite Morse koodu akpọ a drum igwe, na-gụnyere.
Osmo na-ihe iPad ngwa iji na 5-13 nọ n'agbata afọ, na a isi na mbadamba nkume na-anọchi, na a mirror na attaches ya n'elu na-atụgharị tebụl gị n'ime a "na-akpọ ubi". Ọ pụtara na ụmụ nwere ike idowe na-ọnọ ọnụ ọgụgụ ma ọ bụ akwụkwọ ozi taịl, osisi mgbaghoju anya iberibe ma ọ bụ ha onwe ha ihe osise ndị ahụ n'ihu ebe iPad na-egwu Osmo si mmụta na creativity egwuregwu. Ọ nwere nza nwere maka ọdịnihu mgbasa.
8. Ọganihu Kids Coloud ekweisi (£ 25)
Ọ bụrụ na gị na ụmụ gị na-ọgbụgba ọkụ Justin Now, One Direction ma ọ bụ N'ịbụ nke unyi Taylor Swift na ị, a yi n'elu-ntị ekweisi nwere ike ịbụ nnọọ ihe na-gị na Christmas udo. Ha na-na ìhè ma na-eche dị ha nwere ike na-iti, na kasị adọrọ adọrọ feature ndị nne na nna nwere ike ịbụ wuru na-olu akara na-enyere gị na-amachi otú oké gị na ụmụ gị na-egwu ha music.
World of Warriors: A New dike.
9. World of Warriors: A New dike (£ 7)
Ọ bụghị a mpempe technology, kama a akwụkwọ dabeere na a mobile egwuregwu: Uche swiiti akụkọ ihe mere eme-themed World of Warriors, nke dị ka otu ụlọ ọrụ Moshi Monsters, ka eduba a kpọrọ nke ngwá ahịa na oge Christmas 2015. Ya mere nwere ike a mobile egwuregwu n'ezie ume ụmụaka na-agụ? Dabere na m abụọ ụmụ ọṅụ nke A New dike, ee. Ọ bụ ihe ekere òkè akụkọ banyere ụfọdụ n'ime egwuregwu si isi odide, nke na-ele ka a kwesịrị ekwesị akụkọ kama a mkpa nkwado atụ ogho-apụ.
• Interview: Uche swiiti okwu World of Warriors
Ọzọ mbadamba ngwa, a na-eto eto na ụmụ - na-arụ ọrụ na gam akporo mbadamba nakwa dị ka iPads. Ihe ị na-gị 25 quid bụ a set nke anụ ahụ akwụkwọ ozi - ise ụdaume - nke na-ghọtara site Tiggly si apps mgbe etinye na mbadamba touchscreen. Ndị ngwa ọdịnala - Tiggly Doctor, Tiggly Story Maker, Tiggly okpuru mmiri na ọhụrụ Sesame Street Mkpụrụ Okwu Kitchen Reading - na free, iji akwụkwọ ozi na-enyere ụmụaka na-eme phonics, edozi nsogbu na okwu nkà iwu, n'etiti ndị ọzọ.
Inye "smart" Barbie nwa bebi a enweteghi na nzuzo mgbakwasị? Stargazer Lottie nwere ike ịbụ ihe na-akpali ọzọ. The agwa bụ ihe-enyocha mbara igwe na ya onwe teliskop na kwesịrịnụ-ekpo ọkụ uwe n'abalị-oge stargazing. Ihe bụ ihe ọzọ, ya onye na-arụ ọrụ na European Space Agency, nke ka ulo oru a oyi website na-agba ume ka ụmụaka na-chọpụta ihe banyere mbara igwe n'elu.
More akwụkwọ ozi e mere iji ga-eji na a mbadamba - iPad naanị na nke a, n'ihi na ugbu a - na Marbotic kpọbata ihe dum mkpụrụ si uru nke touchscreen-recognizable osisi akwụkwọ ozi. Malite ndụ dị ka a Kickstarter crowdfunding oru ngo, na Smart Letters ga-abụọ enyi apps mgbe ha na-aga na-ere na n'oge December - Alphamonster na Vocabubble - na ihe na-esonụ na 2016. A mma n'anya n'oge a ighikota na osisi-ozi egwuregwu mgbagwoju anya.
Aka Board Starter Kit.
13. Aka Board Starter Kit (£ 95)
More Micro-electronics na a kit, nke na-ejikọta wires na agu iyi mkpachị na omenala papercraft - mmado, cutouts na stencil na-gụnyere ke igbe. The isi bụ n'ezie Touch Board: ihe Arduino kọmputa na 12 electrodes, na nwere ike jikọọ na-eji "electric agba" - conductive agba na ike ga-ese na na ngwaọrụ ndị ọzọ ka ha n'ime sensọ. Atọ oru na-atụ aro na igbe, na ihe n'ike mmụọ nsọ ke ukara website.
Hello Ruby: Njem na nzuzo.
14. Hello Ruby: Njem na nzuzo (£ 11)
Iji na ụmụ okoro na ụmụ agbọghọ na-adịcha, Hello Ruby bụ brainchild nke Finnish Mmepụta Linda Liukas, onye welitere $ 380k na Kickstarter na 2014 ka crowdfund ya akwụkwọ na-akụzi fundamentals nke mmemme na ụmụ. Ruby bụ kpakpando nke akwụkwọ, nke bụ ọkara akụkọ na ọkara nzuzo metụtara omume. Kama izi kpọmkwem asụsụ, ọ na-elekwasị anya mgbakọ echiche: agbasa ala aga-eme n'ime nzọụkwụ, spotting ihe nakawa etu esi na ndị ọzọ.
• Interview: Linda Liukas na n'ike mmụọ nsọ n'ihi Hello Ruby
Toca Akwụkwọ E Kere Eke.
15. Toca Akwụkwọ E Kere Eke (£ 20)
Toca Boca bụ otu n'ime ndị kasị na-echepụta, okike ụmụ ngwa mmepe na ụwa, na ya quirky animated odide ọ ụtọ ọtụtụ nde ụmụaka na-adịbeghị anya. Toca Akwụkwọ E Kere Eke bụghị ngwa, ezie na: ọ bụ a "play set" nke yi critter akụkụ mere si kaadị, nke ụmụ nwere ike putara ọnụ Otú ọ dị ha na-amasị ka ha onwe ha na-agụ akụkọ.
• Interview: Toca Boca atụmatụ iji nweta n'ime online video
na naa, 3D na-ebi akwụkwọ nwere ike ịbụ na n'elu ndepụta nke Christmas ọnọde n'ihi na ọtụtụ nne na nna - ka naanị n'ime ha Amawaputala - ma n'ihi na ndị chọrọ ka ụmụ ha atọpụ na technology n'ihu ìgwè mmadụ, ndị Da Vinci Obere bụ uru a na-agbalị. Ọ na-ekwe nkwa iji zere mmezi mgbu nke ihe mgbagwoju ụdị, na nwere ya online obodo ka ụmụaka na-na-akpali 3D aghụghọ ibipụta.
British mmalite Kano bụ ihe ọzọ na ụlọ ọrụ na-achọ ka ụmụ Mgbakọ - na na nke a, ha na-ewu na kọmputa onwe ha. Ya na ngwaọrụ na-dabeere na ọhụrụ utu Pi kọmputa, kwadokwara ọkpụkpọ òkù na a na-egbuke egbuke oroma keyboard na software ka ụmụaka na-eme music, mmemme na ọbụna fiddling banyere na Minecraft. Ọzọkwa ọhụrụ: a £ 110 "na ihuenyo kit" maka ụmụaka aka ka ha nwee obere ngosi.
• Review: ihe ọ dị ka na-eme ka a Kano kọmputa na gị na na
18. Ee Robin mbadamba (£ 30 + kwa ọnwa nkwekọrịta)
Onye ọzọ na Amazon si Fire HD Kids Edition (ma ọ bụ gaa njem-on iPads) bụ mobile ọrụ maka nke Robin, nke ulo oru na October. Ọ bụ ihe gam akporo mbadamba na-abịa etinyegoro na ngwa ọdịnala, egwuregwu na e-akwụkwọ, nakwa dị ka free ohere ka (magburu onwe) Hopster ọrụ, nke n'ùkwù n'ùkwù nkwanye TV na-egosi na izi Obere-egwuregwu. Nne na Nna njikwa na a web nzacha usoro na-gụnyere.
Stampy si mara mma Book.
19. Stampy si mara mma Book (£ 8)
Ọ bụrụ na i nwere ụmụ na-n'anya Minecraft na YouTube, ị ga-ama ihe niile banyere Stampy - aka British YouTuber Joseph Garrett. Ebe dọtara karịa 6.6 nde ndị debanyere aha ya ọwa, a afọ, ọ na ulo oru ya akwụkwọ mbụ na nkwusa Egmont. Ọ bụ ngwakọta nke cartoons, quizzes, eziokwu banyere Stampy na ndị enyi ya, na ọrụ echiche - gbakwunyere a achicha Ntụziaka - na ọtụtụ zoro maka ya-eto eto Fans ike ịnọ. Ihe karịrị nnọọ a ego na-na-enwe kwa afọ.
• Interview: si Minecraft akwụkwọ, ihe Stampy mere esote
Dot na Dash.
20. Dot na Dash nzuzo robots (£ 130)
More nzuzo maka ụmụaka - a nnukwu isiokwu 2015 - ma e wezụga nke a oge e nwere ihe a ụzọ rotund robots aka. Dot bụ anyịnya otu n'aka nri na anya dị ka a webcam, mgbe Dash bụ ya ibu enyi, ike inyefe gburugburu ụlọ. Ma na-achịkwa stringing ọnụ blocks nke koodu na ha enyi ngwa ọdịnala, nke ịhụ na-akụziri ụmụaka ụzọ mmemme nkà.
• Nwere ike programmable robots Dot na Dash akụziri gị na na na koodu?
Techair Universal Tablet Ileba maka Kids.
21. Techair Universal Tablet Ileba maka Kids (£ 25)
Ihe ọ bụla mbadamba gị na ụmụ gị na-eji - ọma, dị ka ogologo dị ka ọ bụ a 10.1-anụ ọhịa otu, ọ bụ ezie na a asaa nke anụ ọhịa ahụ version-dịnụ - a bụ otu n'ime ndị kasị mma echiche maka echebe ya. Ọ bụghị nanị n'ihi na ọ ga-azọpụta unu atụ ụjọ na ihuenyo-ịgbawa ma ọ bụrụ na ngwaọrụ na-ama esịn n'ala. The n'ire ebe ebe a bụ na-abụghị nke ikpe bụ hichapụ-ọcha, na keosusu itienna nyere maka ụmụ idekasi ha doodles na ikpe na agba ha na.
Utu Pai 2 model B.
22. Utu Pai 2 model B (£ 26)
Isi mkpesa nke Kano kọmputa bụ na ọ na-eme ka ndị utu Pi a bit ọzọ inweta ụmụaka. Ma ọ bụrụ na ha (ma ọ bụ na ị na) ndị ọzọ nwee obi ike, nwere ike ị chọrọ na-aga ogologo ngwaọrụ na ịzụta ọhụrụ Pi kọmputa osisi. Ọ bụ ugboro isii ngwa ngwa karịa gara aga nlereanya, na ike nke na-akwado Windows 10 sistemụ ma ọ bụrụ na Linux bụghị gị ihe. Ị ga-chọrọ ịzụta ngwaọrụ ndị ọzọ dị ka a na ihuenyo na keyboard, ma na-etinye a Pi dabeere na usoro ọnụ site ọkọ pụrụ ịbụ a n'ezie fun na nkwonkwo oru ngo.
Otu ihe onyinye maka Minecraft-ara ụmụaka: nke a bụ maka ndị na-egwu na-akpọ Mojang egwuregwu na a na desktọọpụ kọmputa kama a console ma ọ bụ mobile ngwaọrụ. Gameband bụ a wearable gbalaga nke, mgbe plugged na via USB, Akwadoo elu ụmụ Minecraft ụwa, ya mere, ha nwere ike na-ha na-egwu na enyi ulo. A ole na ole ụwa bịa etinyegoro, na ngwaọrụ na-arụ ọrụ dị ka a pixellated watch - zuru ezu na software hazie ya ngosi.
N'onwe Electric mgwakota Kit.
24. N'onwe Electro mgwakota Kit (£ 15)
na eziokwu, ọ bụla ngwaahịa na ebube Technology ga-azọpụta anyị website bụ uru gị echiche Christmas gifting. Ma, ọ bụ ndị N'onwe Electro mgwakota Kit ahụ nwere ike ịbụ ihe kasị adọrọ adọrọ: ọ bụ a collection of ọkụ, switches na buzzers e na-squashed n'ime Play-Doh (ma ọ bụ mgwakota na ị na-na na na gị na ụmụ gị n'ụlọ) ike yi - na squidgy - electronic na sekit na sekit. The website awade ọtụtụ echiche maka ihe na-eme ka, ma ọ bụrụ na mmụọ nsọ na-adịghị.
Ee, ọ bụ oké ọnụ. Ee, ewu ọ ga-abụ ụmụ ara elu gị dum Christmas ụtụtụ dịkarịa ala - na o nwere ihe karịa 1,100 iberibe. Ma Meccano si humanoid(nwoke) robot bụ n'ebe ahụ na Lego si Mindstorms EV3 bot ka a na-ghar ụzọ n'ime robotics na-eto eto eso. Dị ka ndị ọzọ na ngwaọrụ na a roundup, e nwere ihe a oyi ngwa ịchịkwa G15, ọ bụ ezie na ụmụ nwere ike na-akụziri ya site na ikwu okwu na ije.
Night Zookeeper na nnyocha Giraffes.
26. Night Zookeeper na nnyocha Giraffes (£ 7)
Ọzọ traditonal ebipụta akwụkwọ, ma ọzọ, a eduba site a digital ụwa. N'okwu a, ọ Night Zookeeper, na online obodo ebe ụmụ nrọ elu ma na-abịaru ha kpokọtara anụmanụ, mgbe na-agụ (na-eke) akụkọ na egwu na-akpọ a game iji chebe ha zoo. Ugbu a, e bụ akwụkwọ mụbaa na ụwa na ya e kere eke, zuru ezu na nnyocha giraffes na a oge-ejegharị ejegharị elephant. Nke a bụ otu n'ime ndị mbụ akwụkwọ ahụ m na-ejide m (na mbụ na-ala azụ-agụ) isii afọ nwa agụ ya onwe ya mgbe ọkụ na-- elu otuto n'ezie.
• Interview: Night Zookeeper awade ụmụaka a ụzọ ọhụrụ ike ma na-play
Echefu humanoids: a n'akpa uwe-sized robot ọzọ bụ reminiscent nke agadi-akwụkwọ Apple iMac òké. Ọ ngwugwu ọtụtụ smarts ezie: ụmụ "mmemme" ngwaọrụ site na-eru edoghi na nkanka nke na agba na akwụkwọ, nke na-sụgharịa iwu site ya OxoBlockly mmemme ngwá ọrụ. The Ozobot enyi ngwa ọdịnala n'ihi na gam akporo na iOS ga-akụziri ụmụaka ga-esi ọtụtụ nke robot.
28. Tube Heroes DanTDM dike Pack (£ 15)
Olee otú ihe ọgụgụ nwere a tech n'akuku? Mgbe ha na-dabeere na ama YouTubers, n'ezie. British gamer Daniel "The Diamond Minecart" Middleton nwere otu nke kasị ewu ewu na ọwa ke ererimbot ke 2015 ya ekele Minecraft ahụmahụ. Ọ bụkwa otu n'ime ndị mbụ kpakpando ghọọ a "tube Heroes" edinam ọgụgụ, mezue ya wolf olileanya na-adịghị. Ndị ọzọ na-ke nsonso gụnyere CaptainSparklez, Sky na Tobuscus - niile maara aha-eto eto Minecraft Fans.
• analysis: The Diamond Minecart-aghọ ndị kasị ewu ewu YouTuber
Ravensburger Science X Electronics na Circuitry
29. Ravensburger Science X Electronics na Circuitry (£ 30)
More Micro-electronics, na a ọma chere si igbe nke aghụghọ na Aims na-ụmụaka aka-na na transistors, resistors, capacitors na wires. Na-elekwasị anya bụ na ụmụaka-ewu ha onwe ha oru, si ọkụ na Mkpu ka a okwusike maka ha music. E nwere asatọ ọrụ na niile, ma ọtụtụ nke mmụọ nsọ maka inwekwu nwere mgbe ha na-na na e dechara.
M Nledo Na My Little Eye: Ihe Spy On Me.
30. M Nledo Na My Little Eye: Ihe Nledo na Me (£ 0.01)
Otu maka ubé okenye ụmụaka. O nwere ike iyi ọnụ ala ma na dịtụ churlish inye ụmụ gị a ugbu na-eri gị a penny na ike eji Inyo. Ma ha na-amụta na mgbe (banyere ihe mere Inyo, bụghị banyere gị cheapness na churlishness - ọ bụ ezie na kwa). Akwụkwọ a si tech ike Zoo My Ass "nkọwa 27 internet-ejikọrọ ezinụlọ ngwaahịa na ngwa na ike-hacked n'ime ma ọ bụ mee ka ndị nledo na ndị na-enweghị ihe ọmụma ha ". Obi ụtọ Christmas…
nke ahụ bụ 30 ideas for your Christmas gifting, ma ihe nwere anyị Agbaghara? Ihe ngalaba bụ oghe maka gị aro nke tech metụtara onyinye maka ụmụaka.
55543	0 3D-ebi akwụkwọ, Amazon.com, Nkeji edemede, Books, Ụmụaka tech, Christmas, Mgbakọ, Atụmatụ, Ngwa, Minecraft, Programming, ígwè ọrụ na-, Science, Ịzụ ahịa njem, Star Wars, Stuart Dredge, mbadamba kọmputa, Technology, YouTube
← Beeline ịgba ígwè navigation ngwaọrụ nyochaa: nchegbu-free fun maka nchọpụta Ise siga elu-ike afọ nwere ike imebi akwara ozi ụbụrụ →